Thursday 19th of October 2017, 5:48:52 am
अर्जेन्टिनालाई चुनौतीः आज अंक बाढे विश्वकपबाट बाहिरिने संभावना
Thursday 5th of October 2017, 06:17 PM
असोज १९ – अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रशिक्षक जोर्गे साम्पावलीले लियानल मेस्सी र पाउलो डिबाललाई सँगै खेलाउनु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । अर्जेन्टिनाले विश्वकप फुटबल २०१८ अन्तर्गत दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रको छनौट अन्तर्गत शुक्रबार बिहान पेरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । यो खेल अर्जेन्टिनाका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । यसका लागि बार्सिलोना स्टार मेस्सी र युभेन्टर स्टार डिबाल अहिले अर्जेन्टिनामा छन् । दुवै स्ट्राइकरले सँगै निकै कम...
ताजिकिस्तानविरुद्ध खेल्ने नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा,हेटौँडाका तिनजना टिममा
Wednesday 4th of October 2017, 08:03 PM
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत ताजिकिस्तानसँग खेल्ने नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा गरेको छ । आगामी असोज २४ गते ताजिकिस्तानमा हुने खेलका लागि मूख्य प्रशिक्षक ग्योतोकु कोजीले नेपाली टिम छनौट गरेका हुन् । यसअघि एन्फा मैदानमा भदौ २० गते भएको ताजिकिस्तानबिरुद्ध खेलेकै टोलीका अघिकांश खेलाडीले यस टिममा पनि स्थान बनाएका छन् । त्यस खेलमा नेपाल २-१ ले पराजित भएको थियो । नेपाली टोलीमा गोलरक्षक बिशाल श्रेष्ठको स्थानमा...
पिएसजीमा नेइमारको तलब प्रतिमिनेट ८ हजार !
Tuesday 26th of September 2017, 08:37 AM
काठमाडौँ । फुटबल लिक्सले हालै बार्सिलोनाबाट फ्रेन्च क्लब पिएसजी गएका ब्राजिलियन फुटबलर नेइमारको तलबको खुलासा गरेको छ । फुटबल लिक्सको खुलासा अनुसार विश्वका महंगा फुटबलर भनिएका अर्जेन्टिनी फुटबलर कार्लोस टेभेज भन्दा नेइमारको तलब अलिकति मात्र कम रहेको बताइएको छ ।२२२ मिलियन युरोमा पिएसजी गएका नेइमारको प्रति महिना ३ मिलियन युरो तलब रहेको खुलासा भएको छ । यस अनुसार प्रति बर्ष नेइमारले ३६ मिलियन युरो तलब बुझ्ने गर्दछन । अर्जेन्टिनी फुटबलर टेभेजले...
आर्सनलले जित्यो, दुई गोल गर्ने अलेक्जेन्डर नायक
Tuesday 26th of September 2017, 08:04 AM
असोज १० – इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत सोमबार राति भएको खेलमा आर्सनल विजयी भएको छ । घरेलु मैदानमा भएको खेलमा आर्सनलले वेष्ट ब्रोमलाई २–० ले हराएको हो । आर्सनलको जितमा दुवै गोल अलेक्जेन्डर लाकाजेटले गरे । २० औं मिनेटमा एलेक्स सान्चेजले प्रहार गरेको फ्रि किक बल क्रसबारमा लागेर फर्किएपछि लाकाजेटले त्यसलाई गोलमा परिणत गरेका हुन् । पहिलो हाफमा १–० को अग्रता लिएको आर्सनलका लागि ६७ औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टी अवसरमा लाकाजेटले गोल गर्दै अग्रता...
नेपाल आज प्यालेस्टाइनसँग खेल्दै
Sunday 24th of September 2017, 09:54 AM
असोज ८ – सोह्र वर्षमुनिको एएफससी च्याम्पियनसिप फुटबलको छनौटमा नेपालले आइतबार प्यालेस्टाइनसँग खेल्दैछ । नेपालले प्यालेस्टाइनलाई फराकिलो गोलअन्तरले हराए र अर्को खेलमा इराकले भारतलाई हराए उत्कृष्ट उपविजेताका रुपमा च्याम्पियसिपमा छनौट हुने नेपालको सम्भावना कायमै रहन्छ । समूहको पुछारमा रहेको प्यालेस्टाइन प्रतियोगिताबाट बाहिरिइसकेको छ । इराक अंकतालिकाको पहिलो र भारत दोश्रो स्थानमा छन् । नेपाल र प्यालेस्टाइनको खेल दिउँसो साढे ३ बजेपछि...
क्यान्सर जितेका बोसले जिते ब्याडमिन्टनको उपाधि
Saturday 23rd of September 2017, 04:25 PM
हेटौँडा,७ असोज. क्यान्सर जितेका बिके बोसले जिल्ला स्तरीय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन् । आज भएको फाइनल खेलमा छोरा अभिषेक बोसलाई पार्टनर लिएर खेलेका बोस बाबुछोराको टीमले महेश श्रेष्ठ र सुजित मल्लको टिमलाई २१–११ र २१–१७ को सोजो सेटमा पराजित गरे । बिके बोस क्यान्सरको उपचार पछि एक महिना अघिबाट खेलमा फर्कीएका थिए । स्कुल जिवनदेखि नै ब्याडमिन्टनमा रुची राख्ने बोसले स्कुले जीवनमा थुप्रै उपाधि जितेका छन् । उनी विगत ५ वर्षदेखि मकवानपुर...
डिएगो कोष्टा एथ्लेटिको मड्रिड जाने
Friday 22nd of September 2017, 09:21 AM
असोज ६ – डिएगो कोस्टा आफ्नो पुरानो क्लब एथ्लेटिको मड्रिड जाने भएका छन् । स्ट्राइकर कोस्टाको स्पेनिस क्लब एथ्लेटिको मड्रिड अनुबन्धका सम्बन्धमा चेल्सी सहमत भएको हो । कोस्टोको अनुबन्ध आउँदो जनवरीमा हुनेछ । दुई क्लबबिच अनुबन्धका सम्बन्धमा सहमति जुटेको र अब व्यक्तिगत कुरा तथा मेडिकल मात्रै बाँकी रहेको छ । २८ वर्षका कोस्टा सन् २०१४ मा तीन करोड २० लाख पाउण्डमा एथ्लेटिको मड्रिडबाट चेल्सी आएका थिए । कोस्टाको मेडिकल केही दिनमा हुनेछ । कोस्टाले यो सिजन...
यसकारण अनिश्चितकालको लागि स्थगित भयो जिल्ला लिग (भिडियो)
Thursday 21st of September 2017, 05:19 PM
हेटौँडा,५ असोज हेटौडामा जारी जिल्ला लिग फुटबल अनिश्चित कालको लागि स्थगित भएको छ । हिजो बुधबार एफसी इन्टरनेट सिटि र वागमती गाउँपालिकाको खेलमा झडप भएपछि खेल रोकिएको थियो । हिजोबाट रोकिएको खेल आज हुने आशमा रहेका खेलप्रेमिहरुले अब खेल हेर्न नपाउने भएका छन् । जिल्ला फुटबल संघ मकवानपुरको आज भएको बैठले लिग स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तो छ निर्णय ...
जिल्ला लिग अनिश्चितकालको लागि स्थगित
Thursday 21st of September 2017, 04:39 PM
हेटौँडा,५ असोज, एफसी इन्टरनेट सिटि हेटौँडा र वागमती गाउँपालिकाबिच भएको खेलमा तनावको स्थिति सृजना भएपछि हिजोबाट रोकिएको जिल्ला लिग फुटबल अनिश्चित कालको लागि स्थगित भएको छ । आज हेटौँडामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले लिग अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरिएको बताए । चाड पर्वको मौसम सुरु भैसकेकोले अब खेल गर्न समय अपुग हुने भन्दै स्थगित गरेको उनको भनाई रहेको छ । हिजो भएको खेलमा खेल मैदानमानै कुटाकुट...